Fikarohana momba ny firaisana Fikarohana vaovao momba ny traikefa sy ny fizotran'ny fahafatesana, nosoratan'i Walter Semkiw, MD - Fikarohana Reincarnation
Fikarohana vaovao momba ny traikefa sy ny fizotran'ny fahafatesana, nataon'i Walter Semkiw, MD
Ny fahasoavana amin'ny fahafatesana, nataon'i Kathleen Dowling Singh
Kathleen Dowling Singh dia nanoratra boky iray, Ny fahasoavana amin'ny fahafatesana, amin'ny fizotran'ny fahafatesana noho ny aretina mitaiza, izay ananan'ny olona tsirairay ny fotoana hiatrehana ny fomba fiaina. Izany dia mifanohitra amin'ny fahafatesana tampoka, izay tsy ahitan'ny olona ny mandinika ny fizotran'ny fahafatesana. The Grace in Dying dia filozofika, teny ary somary sarotra vakina. Amin'ity lahatsoratra ity dia aparitako ao amin'ny bokin'i Singh ny hevitra sy ampahafantariko ny porofon'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao, izay hita ao amin'ny bokiko, ateraka indray. Ho fanampin'izay, mizara fampahalalana izay voaraiko tamin'ny niasa tamina fanahy tena manan-tsaina nampitaina tamin'ny alàlan'ny mpampitohy Kevin Ryerson.
Singh dia manamarina fa amin'ny maha-olona manana aretina mitaiza kely eo akaikin'ny vanim-potoanan'ny fahafatesana ity, io olona io dia mahatratra ny traikefa misimisy kokoa, toy ny fahazavana izay azon'ny yogis na tompony ara-panahy atao mandritra ny taona maromaro momba ny fomba fisainana. Io fiovan'ny endriny io dia mampifangaro an'Andriamanitra. Ity zava-niainana ity dia ahitana:
Ny Omnipresence-fahatsapana ho toy ny misy ankehitriny
Ny fahatsapana ny firaisana amin'ny zavaboary rehetra
Fihetseham-pihavanana sy fifaliana
Ny traik'efa mivezivezy manoloana ny fahafatesan'ny fahafatesana amin'ny fahafahana mitory ny zava-mitranga eo amin'ny vatan'ny olona maty.
Ny mahaliana dia misy ny tranga momba ny fanambadiana indray avy any Ian Stevenson, MD ao amin'ny Oniversiten'i Virginia, izay nofaritana tamin'ny antsipiriham-pahaizana ity traikefa ity, ary koa ny traikefa amin'ny famerenana amin'ny laoniny. Mba hamerenana ity fitantaràna nahafatesana mahafinaritra ity dia azafady:
Nai Leng dia miaina fanandramana amin'ny fahafatesana sy fahaterahana indray: tantaram-piainana taloha momba an'i Nai Leng | Chaokhun Rajsuthajarn (Choate)
Ny fahatakarana ny fizotry ny fahafatesana dia afaka manome fampiononana lehibe ho an'ireo rehetra miatrika ny tsy fahombiazan'ny vatana. Ho an'ireo izay tsy mahatakatra fa ny fahatsiarovan-tena sy ny maha-olona azy no mbola velona aorian'ny fahafatesana, dia mety hampijaly sy henjana ny dingan'ny fahafatesana. Kathleen Singh dia mamaritra ireo dingana ara-psikolojika goavam-be telo momba ny fahafatesana ho an'ireo izay manana aretina afindrana, izay korontana, fileferana ary Ny fahamboniana. Andeha hodinihintsika ireto dingana ireto.
Chaos sy ny vanim-potoan'ny fahafatesana sy ny fahafatesana tao Kubler-Ross
Ny dingana ao amin'ny Chaos dia manomboka rehefa manoro hevitra ny olona fa manana aretina lava izy ireo ary ho faty. Ny fanasarotam-piaramanidina dia ahitana ny fizotran'ny fahafatesana sy ny fahafatesana izay nofaritan'ny société société Elizabeth Kubler-Ross, MD, izay, araka ny voalaza ao amin'ny Wikipedia, dia:
fandavana- Eo amin'ity sehatra ity, mino ilay olona fa diso ny famaritana ary mifikitra amin'ny zava-misy marina izy ireo.
Hatezerana- Rehefa fantatry ny olona fa tsy afaka mitohy ny fandàvana dia lasa sahiran-tsaina izy ireo, indrindra fa amin'ny olona akaiky azy ireo. Ny valiny ara-psikolojikan'ny olona iray mandalo ity sehatra ity dia: "Nahoana aho no? Tsy rariny izany! Ahoana no hitrangan'izany amiko? Iza no tokony homena tsiny? Nahoana io no hitranga? "
varotra- Ny dingana fahatelo dia midika ny fanantenana fa ny olona dia afaka misoroka ny antony mampalahelo. Amin'ny ankapobeny, ny fifampiraharahana amin'ny fiainana lava dia vita amin'ny fifanakalozana fomba fiaina voaofana. Ohatra: "Mampanantena aho fa olona tsara kokoa."
fahaketrahana- "Malahelo be aho, nahoana no kivy aho? Ho faty tsy ho ela aho, ka inona no teboka? Fa maninona no mandeha? "Nandritra ny dingana fahaefatra, ny olona dia maniratsira ny fankasitrahana ny fahafatesany. Ao anatin'izany toe-javatra izany dia mety hangina ny olona, ​​mety handà ny mpitsidika ary handany fotoana be alahelo sy maratra.
fanekena- "Ho tsara izany. Tsy afaka hiady aminy aho. Afaka miomana amin'izany ihany koa aho. "Amin'ity dingana farany ity dia manaiky ny fahafatesany ny olona. Miala sasatra ilay olona maty ary mihevitra ny fomba fijery mivantana amin'ny fiainana.
Chaos, avy amin'i Kathleen Singh, dia misy ihany koa dingana fanampiny, izay amarazany ny:
fahafoizako- Ny olona miatrika ny fahafatesana dia mahatsapa fa ny manodidina azy, izay tsy miatrika ny fahafatesana, dia tsy mahafantatra hoe inona ny toe-javatra misy ny fahafatesana eo akaiky. Ny firaisana dia mifandray amin'ny fahatsapana ho irery.
Anxiety-Tsy mahagaga raha manahy ny amin'ny hoaviny ny olona maty.
Famoizam-po- Ny olona maty dia miatrika fanantenana fanantenana, izay mety miteraka fahaketrahana mafy.
Mandeha Mandeha- Manome toky amin'io lafiny io, ny olona dia manohitra ny vokatry ny aretina farany. Amin'ity fotoana ity, mamoy ny olona ary manaiky fa ho faty izy ireo. Ity dingana ity dia azo oharina amin'ny dingan'ny Acceptance Kubler-Ross.
Fahatahorana ny fanabeazana- Ity teny ity dia tsy voafaritra tsara ao amin'ny bokin'i Singh, fa ny hevitro dia hoe matahotra ny olona fa hitsahatra ny maha-izy azy ny maha izy azy, hiankina amin'ny maha-Andriamanitra na tsia ny mombamomba ny olona. Izany tahotra izany dia tanterahina amin'ny teny bodista anatta-ny hoe tsy misy tena tsy miova, maharitra, tsy misy fanahy na toetra maharitra eo amin'ny zavamananaina.
Soa ihany fa porofo mivaingana momba ny vatana vaovao ny hoe anatta dia hevi-diso, toy ny raharaha momba ny fanambadiana, ary ao anatin'izany ireo izay navoakan'i Ian Stevenson, MD avy ao amin'ny Oniversiten'i Virginia, dia maneho fa ny olona dia miorina amin'ny toetrany, toetra, toetra ary tarehin-javatra toy izany. Ny fanahy tsy mety maty dia rafitra angovo izay miaro ny maha isika antsika. Raha te hianatra bebe kokoa, mandehana any:
Porofo sy fitsipika momba ny fanambadiana vatana vaovao: Fahatakarana ny fiainana taloha
Mampiasa teny iray avy amin'i Jesoa avy any Nazareta i Kathleen Singh mba hisambotra ny maha-zava-dehibe ity dingana ity: "Tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitraponao no atao." Ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra dia mitarika any amin'ny ambaratongan'ny Transcendence, izay voalaza etsy ambony.
Ny Fanahy Masina Ahtun Re sy ny Fahambonian-toetra ho toy ny Fanjakana "Lozam-pifamoivoizana"
Manana tombony aho manana fahatakarana manokana momba ny tontolo ara-panahy arakaraka ny niarahako niasa tamin'i Kevin Ryerson tamin'ny isam-bolana nanomboka tamin'ny 2001. Kevin dia fampahalalam-pomba mahazatra, midika izany fa afaka miditra amin'ny toe-tsaina misaina izy mba hamela ny fanahy haka ny vatany mba hahafahan'ireo fanahy ireo mifandray amin'ny olombelona. Ny tena marina, i Kevin dia nanasa fanahy iray antsoina hoe Ahtun Re, izay naneho ny fahaizana mametraka ny mari-pahaizana momba ny fiainana amin'ny fomba tena marina. Ankoatra izany, Ahtun Re dia manana tahirim-pahaizana momba ny fahalalana. Ahtun Re no tena mahira-tsaina sy feno fangoraham-po amiko. Raha te hianatra bebe kokoa momba ny asa nataoko tamin'i Kevin, mandehana any:
Fikarohana momba ny Reincarnation Ryerson-Semkiw
Nahazo loharanom-pahalalana ara-panahy tsy manam-paharoa toy izany aho, dia namoaka boky misy ny dinika niarahako tamin'i Ahtun Re momba ireo fanontaniana “sary lehibe”, toy ny hoe inona ny toetran'ny tontolo ara-panahy. Hita fa misy ambaratonga na fiaramanidina maro any amin'ny tontolon'ny fanahy, izay taratry ny fanambarana nataon'i Jesosy hoe: "Ao an-tranon'ny Raiko misy fitoerana maro," Ity boky ity dia mitondra ny lohateny hoe:
Ny niandohan'ny fanahy sy ny tanjon'ny fanambadiana
In Ny niandohan'ny fanahy, Nanontaniako i Ahtun Re hoe toy inona ny toetrany. Namaly izy fa ny fisiany ao amin'ny tontolon'ny fanahy dia tsara indrindra lazaina ho "Lucid Ecstasy." Ity fehezanteny ity, mino aho, dia fomba mahafinaritra hanoritsiana ny dingana amin'ny Transcendence.
Ny fizotry ny fahafatesana, ny fahaleovan-tena ary ny fahaterahana indray: amin'ny famaranana
Ny fanantenako fa ny fahatakarana ny zavatra niainan'ny fahafatesana, ny faharetana ary ny fahaterahana indray dia hamela ny vatana amin'ny faran'ny aretina farany izay tsy dia mampangarahara loatra. Angamba, ity fahalalana ity dia mety hanampy ny olona hijery ny fahafatesana ho toy ny hetsika mitaky fankalazana mangina, satria ny fahafatesana dia mitondra any amin'ny toko iray hafa, tantara hafa iray, amin'ny fivoaran'ny fanahy iray.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny reincarnation, ny fivoaran'ny fanahy ary ny fahatsiarovan-tena ivelan'ny vatan'olombelona, ​​azafady, alaivo:
Ireo lahatsoratra momba ny evolisiona amin'ny fanahy, ny fahafatesana, ny fanaterana indray, ny fitsanganana amin'ny maty, ny fahaterenan'ny biby, ny UFO ary ny ET